အသစ်ခန့်အပ်မည့် ၀န်ကြီးများ အရပ်သားပညာရှင် ပါဝင်ဖို့ရှိ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အခုရက်ပိုင်းအတွင်း စတင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အစိုးရအဖွဲ့တွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်ဟာ အချိန်ကာလ (၂)လ လောက် ကြာမြင့်ဖို့ရှိပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး မလုပ်ချင်တဲ့ ၀န်ကြီးတွေကို ဆက်လက် အနားပေးသွားမှာ
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အမျိုးသားစီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးအကြံပေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေစဉ်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အနေနဲ့ ရာထူးက အနားပေးလိုက်တဲ့အတွက် လစ်လပ်သွားတဲ့ ၀န်ကြီးတွေနေရာတွေကို အသစ်ခန့်အပ်ဖို့အတွက် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နဲ့ တိုင်ပင် အတည်ပြုချက် ရယူပြီးမှ ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့လည်း ဦးဇော်ဌေးက ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဖောင်းပွနေတဲ့ ၀န်ကြီးဌာနတွေကိုလည်း ကျစ်ကျစ် လစ်လစ်ဖြစ်အောင် အသစ်ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီကနေ့ထုတ် အစိုးရပိုင် သတင်းစာတွေမှာတော့ ဆောက်လုပ်ရေး ၀န်ကြီး ဦးခင်မောင်မြင့်၊ အမှတ် (၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီး ဦးဇော်မင်းနဲ့ ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ် ဦးလွန်းမောင်တို့ကို ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန၀န်ကြီး ( ၆ ) ဦးအထိထားရှိတာ ကမ္ဘာမှာမြန်မာတစ်နိုင်ငံထဲရှိမှာပါ ဒုဝန်ကြီး ( ၃ ) ဦးစီထားတာလဲ အရမ်းလွန်ပါတယ်
Sep 03, 2012 05:40 AM
ထူးခြားလာမယ်လို့ထင်သလား။ ဒီတိုင်းတိုင်း ဒီတိုင်းတိုင်းပါဘဲ။
Aug 31, 2012 04:32 AM
Pls, choose from the civilians.
Aug 30, 2012 08:19 PM
Aug 30, 2012 07:29 AM
Happy to heard that U Zaw Min is finally out from his post. At the same time U Khin Aung Myint and U Lwin Maung is also out of their post . Good to hear for that. I hope their vacant post will go to the NLD and some of ethnic minorities. Thank you for posting the news in time.